सबैले थाहा पाउनु पर्ने कुराः यौनसम्बन्ध राख्न हतार गर्दा यस्तो हुन्छ ?
करुणा दिदी नमस्कार ।
मेरो नाम जे हो । यो नाम उनले मात्र बुझ्छिन् । म अहिले २० वर्षको छु । प्लस टु पढ्दाको कुरा हो । मेरै क्लासको एउटी साथीसँग पहिलो पटक डेट जाने क्रममा सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भयो । उनी खुसी थिइन् । अहिले उनको अनुहारबाट खुसी र मस्ती गायब छ । यौन सम्पर्कपछि उनलाई केही पश्चात्ताप भएजस्तो मैले महसुस गरेको छु । मलाई उनको परिवर्तित व्यवहार देखेर दिक्क लाग्न थालेको छ । हामीले त्यो बेला सँगै जीवन बिताउने वाचा गरेका थियौं । अहिले भने उनी सकेसम्म मेरो नजिक पर्न नचाहेजस्तो लाग्छ । उनी खिन्न देखिन्छिन् र यौन सम्पर्कप्रति पनि पटक्कै उत्साहित देखिन्नन् ।
म उनीप्रति असाध्यै आकषिर्त छु । उनलाई नै जीवनसाथी बनाउन चाहन्छु । मलाई अहिले छिटो यौनसम्पर्कमा पुगेकाले उनले मेरो प्रेममा शंका गरिरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । के गुणस्तरीय सम्बन्धका लागि छिटो यौन सम्पर्कमै पुगिहाल्नु नराम्रो नै हो त ? यो केटीको कुरै बुझ्न सकिन दिदी, प्लीज हेल्प मी ।
करुणा कुँवरको जवाफ
पहिलो डेटमै शारीरिक सम्बन्ध भएकामा उनलाई केही आत्मग्लानि भएको हो भन्ने तपाईंको प्रश्नले बताइरहेको छ । उनको व्यवहारले तपाईंले यसको संकेत पाएरै मलाई प्रश्न पठाउनु भएको हो । यसका लागि आभार व्यक्त गर्दछु । कुनै पनि समस्या आउने बित्तिकै समाधानको प्रयास गरिहाल्नुपर्छ । नत्र यो लम्बिदै गएर ब्रेकअप हुने सम्भावना बढ्छ ।
साथीको व्यवहार परिवर्तन भएकाले तपाईंलाई छटपटी गराएको छ । हुनत यो उमेर यसरी छटपटाउने खालको पनि हो । पहिलो डेटमै यौन सम्पर्क भइहालेकाले पनि छटपटाहट बढेको हुनसक्छ । सामान्यतया युवतीलाई भर्जिननेस तोडिएकामा केही पश्चाताप पनि हुनसक्छ । तपाईहरूको छटपटाहटमा यस्ता थुप्रै पक्षहरूको भूमिका छ । तपाईहरू दुवैजना कलेज अध्ययन गर्ने युवा हुनुहुँदो रहेछ । यस्तो बेलामा विपरीत लिङ्गीप्रति आकषिर्त हुनु स्वाभाविक हो । अर्को कुरा पनि सही के हो भने तपाईहरू दुवैजनाले अहिले अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बेला हो । यही बेला प्रेममा पर्ने उमेर पनि हो । तर निजी जीवनमा वा प्रेममा अप्ठ्यारो स्थिति आउला कि भन्ने चिन्तासमेत उत्तिकै देखिन्छ ।
अध्ययनले के भन्छन् त ?
पहिले भएका अध्ययनहरूले देखाए अनुसार पहिलो डेटिङ्गमै पनि यौन सम्पर्क भइहालेमा यसले जोडीको दीर्घकालिन सम्बन्धमा खासै असर पर्दैन । पछिल्लो समय बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार पहिलो डेटिङ्गमै यौन सम्पर्क भइहालेमा त्यसले जोडीको दीर्घकालिन गुणस्तरीय सम्बन्धमा असर पर्छ ।
उक्त अध्ययन १० हजार जनामा गरिएको थियो र उनीहरूमध्ये ४७ दशमलव ९ प्रतिशतले चिनजान भएको केही लामो समयपछि हुने यौन सम्पर्कले यौनको आनन्द र जोडीको गुणस्तरीय जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै ३५ दशमलव ५ प्रतिशतले पहिलो डेटिङमै यौन सम्पर्क हुँदा पनि राम्रो नै हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बाँकी प्रतिक्रियाहरू नगण्य छन् ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिलो डेटिङमै यौनसम्पर्क हुनासाथ सम्वन्ध नै बिग्रने भनेका छैनन् तर उनीहरूको भनाइमा गुणस्तरीय यौन सम्पर्क र गुणस्तरीय जीवनका लागि लामो चिनजान वा पटकपटकका डेटिङपछि मात्र यौन सम्पर्क भए राम्रो हुन्छ ।
मनोवैज्ञानिक हिसावले हेर्दा जसरी तपाईहरू अगाडि बढ्नुभयो, त्यसरी नै तपाईहरूका बीच केही असहज वातावरण बनेजस्तो देखिन्छ र त्यसको असरले तनावमा धकेलेको देखिन्छ । यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । एउटा कौतुहल शान्त पार्ने क्रममा अझ थप छटपटी पैदा भएको छ । पढ्नुपर्ने बेलामा अनेक छटपटी भएको छ ।
हरेक कुरा स्वाभाविक ढंगले अगाडि बढेको खण्डमा त्यसले नतिजा राम्रो दिन्छ । एक अर्कालाई बुझ्न, आफ्नो संस्कृति र नियम कानुनले दिने अनुमति, पारिवारिक स्वीकृति जस्ता पक्षहरूलाई सहज बनाउन केही समय लाग्छ ।
एकअर्कालाई बुझ्ने, यौन सम्पर्कका सकारात्मक तथा नकारात्मक पाटाको अध्ययन-विश्लेषण गर्ने, भविष्यको के कस्तो योजना बनाउन लागिएको हो, त्यस बारेमा स्पष्ट हुने, जीवनका उच्च प्राथमिकताहरू र न्यून प्राथमिकताहरूका बारेमा राम्ररी थाहा पाउने र आपसमा सञ्चार गर्ने गर्नाले अझ सामीप्य बढाउँछ, प्रेम सम्वन्ध घनिभूत हुन्छ । यसले विभिन्न शंका उपशंकाहरू पैदा गर्दैन र मानसिक असर पनि नकारात्मक हुँदैन । यसले पछिको गुणस्तरीय जीवनलाई पनि सहयोग नै गर्छ ।
अर्को कुरा तपाईंकी प्रेमिकालाई पहिलो यौन सम्पर्कले कति असर गरेको छ भन्ने थाहै नपाई तपाई बढी छटपटिनुभएको हुनसक्छ । यसका लागि तपाईले उनलाई राम्ररी सोध्ने र पछिका दिनहरूमा सहमतिमा अगाडि बढ्न सकिने कुरा बताउनुपर्छ । अर्थात् प्रेमिकाको प्रतिक्रिया के छ भन्ने स्पष्ट रूपमा थाहा पाउनुहोस् । समाधान त्यही निस्कन सक्छ । उनलाई नराम्रो असर परेको छ भने पनि आपसमा छलफल गरेर दिल खुलस्त पार्न सकिन्छ । यसले दुवैलाई थप नजिक ल्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।
मानौं तपाईंहरूको सम्बन्धले उनलाई अप्ठ्यारो परेकै हो भने उनलाई केही समय दिएर लामो सम्बन्धको आश्वासन दिन सक्नुहुन्छ । यो उमेरमा हुने शारीरिक सम्बन्ध सामान्य हो । यसले आफ्नो जीवनलाई असर पर्न दिनुहुँदैन भन्ने भरोसा तपाईंले दिनुपर्छ । नेपाली समाजमा महिलाको भर्जिनिटीलाई निकै ठूलो महत्व दिइने भएकाले उनको चिन्ता पनि जायज नै हो । तर समय परिवर्तन भइसक्यो भन्ने कुरा तपाईंहरू दुवैले बुझ्नु आवश्यक छ ।
अर्को कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण के छ भने, उनी तपाईंसँग प्रेम गर्छिन् । तर यौन सम्पर्कका लागि मात्र उदासीन हुन्छिन् भने ठिकै छ । किनभने एकपल्ट गरेको व्यवहारले कसैलाई दुःख लागिरहेको छ भने दोहोर्‍याएर त्यही विषयको माग गर्नु राम्रो होइन । यसमा तपाईं पनि सचेत हुनुपर्छ । माथि नै उल्लेख गरियो, यो प्रेममा पर्ने उमेर त हो नै, त्योभन्दा बढी करियर बनाउने उमेर पनि हो । एकले अर्कालाई जति सहयोग गर्‍यो, दुवैको भविष्य उति राम्रो हुँदै जान्छ । एक अर्कालाई जे गर्दा खुसी लाग्छ, दुवैले त्यसै गर्दै जानुमा भलाइ छ ।
प्रकाशित मिती २००७४ चैत १७ गते